Faritra Atsimo : vola 8,2 miliara Ar hiadiana amin’ny kere | NewsMada
Faritra Atsimo : vola 8,2 miliara Ar hiadiana amin’ny kere
Nodinihina nandritra ny filankevitry ny minisitra, ny alakamisy teo tany Antso­hiny, ny mikasika ny fametrahana sy fampandehanana ny foibe fanarenana ireo olona ihaaran’ny kere sy fanaraha-maso ny fahasalaman’ izy ireo atao any atsimo hiadiana amin’ny tsy fanjarian-tsakafo.
Tapaka tamin’izany ireo fandaniam-bola rehetra entina miady amin’ny kere izay mi­anjady amin’ireo mpiray ta­nindrazana any atsimo. Hatao izany amin’ny alalan’ ny fametrahana ny foibe ma­nokana hiandraikitra momba ireo olona marefo noho ny mosary ireo.
Nampahafantarin’ny praimi­nisitra lehiben’ny go­vernemanta, Ntsay Christian nandritra ny filankevitra ihany koa fa misy ny vola azo avy amin’ny Afri­can Risk Capacityn izay nandoavan’i Madagasikara saram-piantohana isan-taonaka.
Mitentina 8,2 miliara ariary izany vola izany ary haompana tanteraka amin’ny ady amin’ny kere mivaivay any atsimon’ny Nosy. Voakasiky ny fanarenana tsy maintsy atao ny famatsiana rano madio azo sotroina any atsimo, ny fanomezana sakafo ara-pahasalamana ny mponina, ny fanampiana sy fitsinjovana ireo tena marefo ary ny fikarakarana ireo iharan’ny tsy fanjarian-tsakafo.
Hitondra ny volavolanasa sy tetikasa ary volavolam-pandaniam-bola eo amin’ny filankevitry ny minisitra amin’io herinandro io ireo minisitra isan-tokony, araka ny sehatra hiadidiany avy. Ken­dre­na mba ho tena zavatra mivaingana sy maharitra ary misy fiantraikany mivantana amin’ireo olona efa tena mi­tofezaky ny hanoanana amin’ izao fotoana no entin’ireo minisitra amin’izany ary handraisana ny fanapahan-kevitra sy ny fampiasam-bola.